Aung San Suu Kyi. The Nobel Peace Prize 2012
1:02 AM Anonymous 1 comment
ဪသာ် ……. အဆောင်ဆောင် နန်းတွေ ကြငှန်းတွေနှင့်နှော၊
အခေါင်မမြန်းခင်က၊ အောင်စာတမ်း ချို့စေဘို့ အောင်ပန်းညှို့ရရှာတဲ့၊
တောင်တမန်းတို့ဗမာမှာ အဟောင်းသံသရာ အငုတ်တွေနှင့်၊
အောင်ဆန်းတို့ မသာမယာဟာ ၄င်းကံကြမ္မာ အလုပ်ပေထင့်၊
သောင်းမြန် မရဏာစမုတ်မှာတော့ ချုပ်သနဲ့ ယင်းအလိုတွင်၊
ဒေါင်းလံပုဝါအုပ်ပါလို့ ကျုပ်ဖြင့် သင်္ဂြိုဟ်ချင်။ ။
ဪသာ် ……….. တပည့်အရင်းတွေမို့ ကဝိမတင်းနိုင်ဘုကွဲ့၊
သောက ဘလောင်ဆူတော့ တောင်ဇမ္ဗူ ပုဂံခေတ်ဆီက၊
ကျန်ရစ်တဲ့ မြေးတော် အလောင်းစည်သူရဲ့ နန်းကိုဖြင့်၊
လူကြမ်းဓမြတွေ ကြမ်းလာရမ်းလာတဲ့ အရေးတွင်မှ၊
သတင်းလှတဲ့ အင်းဝရာဇာအမွန် သာလွန်မင်းကိုမှ၊
မင်းရဲရ န္တမိတ်ခမြာမှာ ညီသနင်းပေပေါ့၊
မှုန်မှုန်ဆန်ဆန် ပုန်ကန်တဲ့ အတိုင်းရဲ့ပြင်၊
ဪသာ် …… ဖွေဖွေရှာရှာ မကျေစရာပေပေါ့နှော၊
ဘမရာအဆူဆူ ကြာ ကြငှန်းတွေနှင့်၊
ငါတလူ ငါသရမ်းရော့မဟဲ့ လို့၊
ပမာသော် တူတယ်လို့ နှိုင်းမိတယ်၊
မှိုင်းရဲ့ စိတ်ထင်။ ။
အင်္ဂလိပ် ယင်းဂျပန် နှစ်တန်ရှင်းပါလို့၊
တကောင်းရာဇဝင်ကိုတဲ့ ဆက်ချင်သကော။ ။
ထိုထို လူခပဲကို မကြည်ညိုတဲ့၊
ဪသာ် ………. အမှောင်စရိုက်ကယ်နှင့်၊
ဖြေမကြည် နေရီတော့ လွမ်းစေဘို့၊
ပြည်ရွာ ညီညာဘို့ အလုပ်ပေပါ့၊
ဖေါင်နန်းကူးတို့နှင့် အကြေဒဂုန်တည်းဟူသော ရေစုန်မျောလေရဲ့၊
ဪသာ် …….. တောင်နန်း မြောက်နန်း အဆောင်ဆောင် ကြငှန်းနဲ့၊
အခေါင်မမြန်းရခင်က အောင်ပန်း ညို့ရရှာတဲ့၊
12:43 AM Anonymous No comments
ဇွန် ၂၀၀၀ ရွက်နုဝေမဂ္ဂဇင်း
3:30 AM MTK No comments
"အိမ်ဝေး ရွှေများသို့ "
ဆင်နွှဲကြ …။ ။
ငါတို့အိပ်မက် ကဗျာစာအုပ် မှ
3:13 AM MTK No comments
မိုးသောက်ကြယ် ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ Zairyu card နှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာ အပိုင်း ၁ မှ အပိုင်း ၃ကို စုစည်းဖော်ပြထားတဲ့ ပို့စ်ကို http://www.moethaukkye.co.cc/2012/06/zairyu-cardic-card.html မှာ သွားရောက်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
2:31 AM Anonymous 1 comment
ဘယ်နားထိအောင် လာမှာလဲ။ ။
2:21 AM Anonymous No comments
First Weekly ဂျာနယ် မှာ လက်စွမ်းပြထားတဲ့ ကာတွန်းမောင်ရွှေဝင်း ရဲ့ တစ်ကွက်စာ ကာတွန်းလေးပါ။
2:07 AM Anonymous No comments
11:58 PM MTK No comments
ေ ရးသူ -မောင် စွ မ်းရ ည်
-မောင် စွ မ်းရ ည်
11:43 PM MTK No comments
အစ်ကို နှင့် နှမအရင်း
အကိုကြီး အဖအရာက မနေဘဲ
ဘေးတော် မင်းကြီးရွှေလရောင် အဆောင်အခန်းခန်း
တက္ကသိုလ်ဘုန်းကြွယ် (ဇွန် ၂၅ ၂၀၁၂)